आर्थिक Archives - Page3of 41 - Awajonline Online Newspaper - Awajonline Online Newspaper
तामाकोशी गाउँपालिकाले आफ्ना सबै नागरिकको कोरोना विमा गरिदिने
रवीन्द्र गौतम । दोलखा भदौ २७, दोलखा । देश तथा जिल्लामा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या बढ्दै गईरहेका बेला दक्षिणी दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाले आफ्ना सबै नागरिकहरुको कोरोना विमा गरिदिने भएको छ । व्यक्ति, सहकारी र स्थानीय तहको लागत साझेदारीको आधारमा चालु आर्थिक बर्षमा तामाकोशी गाउँपालिकाले कम्तिमा १२ हजार नागरिककाेे कोरोना विमा गरिदिने भएको हो । शनिबार सम्पन्न
रवीन्द्र गौतम । दोलखा भदौ २३, दोलखा । भदौ १५ गते साँझ उत्तरी दोलखाको विगु गाउँपालिका–४, लादुकको ओलीटारस्थित तामाकोशी नदि किनाराबाट गैरकानुनी रुपमा बालुवा उत्खनन् गरेको आरोपमा पक्राउ परेका ४ जनालाई ७५ हजार धरौटी खुलेको छ । पक्राउ परेका ४ जनाले ७५ हजार पाँचसय २० रुपैयाँ धरौटी तिरेका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण
गैरकानुनी रुपमा बालुवा उत्खनन् गर्ने दोलखाका ७ साधनसहित ६ जना पक्राउ
रवीन्द्र गौतम । दोलखा भदौ १५, दोलखा । दोलखाको विभिन्न स्थानबाट ३ दिनको अवधिमा तामाकोशी नदिमा गैरकानुनी बालुवा उत्खनन् गर्ने ७ साधनसहित ६ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उत्तरी दोलखाको विगु गाउँपालिका–४, लादुकको ओलीटारस्थित तामाकोशी नदि किनाराबाट सोमबार साँझ ७ बजे गैरकानुनी रुपमा बालुवा उत्खनन् गरेका ४ ट्याक्टर सहित ४ चालकलाई इलाका प्रहरी कार्यालय
भदौ ७, चरिकोट । मिलिजुली कालिञ्चोक साकोस लि. भीमेश्वर नगरपालिका–६, चरिकोटको २८ औं स्थापना तथा कारोबार सञ्चालन दिबसको अबसरमा आयोजित खुला रक्तदान कार्यक्रममा २८ जनाले रक्तदान गरेका छन् । कोरोना भाईरसको महामारीका विच पनि आवश्यक मापदण्ड र सतकर्ता अपनाउँदै नेपाल रेडक्रस सोसाईटी र नेपाल स्वयंमसेबी रक्तदाता समाज नेपालको शाखा कार्यालय दोलखाको सहकार्यमा सहकारीले खुला रक्तदान
त्रिदेशीय सडक जोड्ने तामाकोशी करिडोरलाई ५ करोड २० लाख, मंसिरमा टेण्डर
रवीन्द्र गौतम । दोलखा साउन ३०, दोलखा । त्रिदेशीय सडक सञ्जालअन्र्तगत तामाकोशी–लप्ची सडक करिडोर निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु. ५ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक बर्षदेखि अत्यन्त विवादित तामाकोशी करिडोरको सडकको लागि चालु आर्थिक वर्षमा ट्रयाक खोल्ने कार्यको लागि संघीय सरकारकारमार्फत सो रकम विनियोजन गरिएको हो । खर्च गर्ने
लागत साझेदारी गर्न नसक्दा जोनकै किसानले पाएनन् किवी अनुदान
रवीन्द्र गौतम । दोलखा साउन १२, दोलखा । दोलखाको किवीफल खेतीलाई जोनकै रुपमा विकास गरिने कार्यक्रमअन्र्तगत किसानलाई उपलब्ध गराईने अनुदान नै किसानले लिएनन् । दोलखाका सहकारी र निजी गरी १२ वटा किवी उत्पादक फर्महरुले सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान नलिएको पाइएको हो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत किवीजोन दोलखाले जोनमा आवद्ध फर्महरुलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा
दोलखाको ३ वटा पुल हेटौँडामा उद्घाटन, दोलखावासी बेखबर
रवीन्द्र गौतम । दोलखा साउन ९, दोलखा । दोलखा जिल्लाको विभिन्न खोलाहरुको सम्पन्न भएको ३ ओटा पक्की पुल बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा उद्घाटन गरिएको छ । बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय हेटौंडाको सभाकक्षमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले ३२ ओटा पुलको एकमुष्टमा उद्घाटन गर्ने क्रममा दोलखाको पनि ३ ओटा पुल उद्घाटन गरेका हुन् ।
दोलखाको २० करोड बजेट फ्रिज, शैलुङ र तामाकोशीले बुझाएन हिसाब
रवीन्द्र गौतम । दोलखा साउन ५, दोलखा । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा दोलखा जिल्लाका ७ वटा स्थानीय तहले करिब २० करोड बजेट फ्रिज गरेका छन् । जिल्लाका ७ ओटा स्थानीय तहले संघीय शसर्त अनुदान र बागमती प्रदेश सरकार शसर्त अनुदान गरी करिब २० करोड बजेट खर्च गर्न नसकी असार मसान्तमा फ्रिज पठाएका हुन् । ९
रवीन्द्र गौतम । दोलखा असार १६, दोलखा । सोमबार रातीबाट जिल्ला प्रवेश गरेको सलह किरा दोलखाको ४ वटा स्थानीयतहमा फैलिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापका अनुसार जिल्लाका नौवटा स्थानीयतहमध्ये ४ वटामा सलहको प्रकोप देखिएको हो । दोलखा समेत कार्यक्षेत्र रहेको कृषि ज्ञान केन्द्र रामेछापका प्रमुख दिनेश आचार्यका अनुसार पातलो संख्याको सलह किरा दोलखाका ४
शैलुङ गाउँपालिकाले सार्वजनिक ग¥यो कोरोना सर्तकताको आम्दानी खर्च
रवीन्द्र गौतम । दोलखा असार ८, चरिकोट । पश्चिमी दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाले कोरोना सर्तकता र रोकथामका लागि आइतबारसम्म भएको सम्पूर्ण आम्दानी र खर्च सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना महामारीको सर्तकता र रोकथामको लागि बागमती प्रदेशमै पहिलोपटक दोलखाको शैलुृङ गाउँपालिकाले आम्दानी खर्च सार्वजनिक गरेको हो । कोरोना महामारी सर्तकता र रोकथामका लागि शैलुङ गाउँपालिकाले पछिल्लो ४